शीर्ष १० श्रीलंका अनलाइन क्यासिनो साइटहरु कुनै जम्मा बोनस छैन
श्रील Lanka्का, सुरुमा सिलोन भनेर चिनिन्छ, दक्षिण एशियामा एक देश हो जुन भारतको महासागरमा भारतको मुनि बसिरहेको छ। तपाईं श्रीलंका, र यसको राजधानी कोलम्बोमा क्यासिनो खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। श्रील Lanka्काको जनसंख्या हाल २१ करोड छ र देशको स्थानीय मुद्रा श्रीलंकाली रुपैया हो।
शीर्ष १० श्रीलंकाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० श्रीलंकाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरूको बारेमा एक विशाल बोनसको साथ!
जब अनलाइन क्यासिनोमा शामिल हुनको लागि स्काउटिंग गर्दै, निश्चित गर्नुहोस् कि यो एक इजाजतपत्र प्राप्त र विनियमित क्यासिनो हो। त्यहाँ यति धेरै अवैध अनलाइन क्यासिनोहरू छन्, जुन क्यासिनोलाई मनपर्दछ, र खेलाडीहरू धोका दिन्छन्। तपाईं अनलाइन धोखाधडीको पनि शिकार हुन चाहनुहुन्न, जसले गैरकानुनी अनलाइन क्यासिनोको प्रयोग गर्नुहुन्छ, ठूलो प्रमोशनहरूको साथ, प्रलोभनको रूपमा।
अनलाइन क्यासिनोको सबैभन्दा खराब हानि एक लत हो। धेरै खेलाडीहरू बाध्यकारी जुवा खेल्छन्, किनकि क्यासिनो सजिलैसँग पहुँचयोग्य छ, र जम्मा गर्ने विधिहरू सीधा छन्। जूवाको लत जीवनलाई ध्वंश गर्ने चीज हो, त्यसैले पासोमा नपर्न सावधान हुनुहोस्। सबै भन्दा माथि, कहिल्यै जुवा मात्रा कहिल्यै तपाईं लस गर्न सक्दैन
श्रीलंका मा जुवा मा वर्तमान स्थिति
आज मुलुकमा धेरै जग्गामा आधारित जुवा घरहरू छन्, जसमध्ये धेरै कोलम्बोमा अवस्थित छन्। दुबै स्थानीय र पर्यटकहरूलाई प्रवेश गर्न र खेल्न अनुमति छ, यदि तिनीहरू १ 18 बर्ष वा सो भन्दा पुरानो भए। पर्यटन यहाँ फस्टाइरहेको छ, त्यसैले यी स्थानहरु बरु लोकप्रिय हो। यद्यपि यो अझै पर्यटकहरू हुन् जो प्राय: प्राय: भ्रमण गर्नेहरू हुन्। तपाईले देख्नुभयो, श्रीलंकामा मुख्य तीन धर्महरू बौद्ध, हिन्दू र इस्लाम हुन् - र ती मध्ये कुनै पनि जुवा खेल्दैनन्। त्यसोभए, स्थानीयहरू ईंट र मोर्टार स्थलहरूमा कम कम पाहुनाहरू हुन्। तिनीहरू जुवा अनलाइन रुचाउँछन्।
श्रीलंका अनलाइन क्यासिनो जटिल लोकप्रिय छन्। यद्यपि दिमागमा राख्नका लागि दुई मुख्य मुद्दाहरू छन्। सबैभन्दा पहिले, श्रीलंकामा इन्टरनेट जडान धेरै राम्रो छैन। हरेक वर्ष, इन्टरनेटको गुणस्तर बढ्छ, तर सामान्यतया, तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ तपाइँको इन्टर्नेट जडानमा। दोस्रो, जहाँ निवासीहरू कुनै पनि विदेशी अनलाइन क्यासिनोहरूमा पहुँच गर्न स्वतन्त्र छन्, प्रत्येक विदेशी अनलाइन क्यासिनोले श्रीलंकाका खेलाडीहरूलाई खुशीसाथ स्वागत गर्दैनन्। यो प्रायः अस्पष्ट कानूनका कारणले हो। त्यसोभए, रमाईलो र भरपर्दो वास्तविक पैसा प्लेटफर्म पत्ता लगाउँदा समस्या हुन सक्छ यदि तपाईंसँग माथि प्रदान गरिएको जस्तो उत्तम अनलाइन क्यासिनोहरूको सूची छैन भने।
सबै भन्दा राम्रो विकल्प छिमेकी देशहरुबाट चलाइएको प्लेटफर्म हेर्नका लागि हो। अनलाइन क्यासिनो भारत कानूनी एक राम्रो विचार हुन सक्छ। स्वागत साइटका लागि हेर्नका लागि अर्को स्थान भियतनाम क्यासिनो हो।
अहिलेको लागि, स्थिति बरु जूवामैत्री हो, केही कानूनी परिवर्तनहरू उनीहरूको बाटोमा छन्। तपाइँका जुवा खेल्ने मजाको साथ सधैं सुरक्षित पक्षमा रहनको लागि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ कानूनहरूमा नजर राख्नुहुन्छ।
श्रीलंका जुवा कानून
देशमा सामान्यतया जूवाको बारेमा कुनै कानून हुँदैन, बजार न त प्रतिबन्धित थियो न त उचित तरिकाले विनियमित थियो। अपरेटरहरू केहि नियमहरू पालना गर्छन्, जबकि खेलाडीहरू आफूले चाहेको ठाउँमा जुवा खेल्न स्वतन्त्र हुन्छन्।
यद्यपि, भर्खर श्रीलंकामा जुवाको कानूनी परिदृश्यमा एउटा ठूलो परिवर्तन भयो। यसभन्दा पहिले स्थानीय श्रीलंका क्यासिनोहरूले सरकारलाई इजाजतपत्र भुक्तानका रूपमा वार्षिक $ १ मिलियन शुल्क तिर्थे। यद्यपि, सरकारले प्रयासहरू गर्न थाले र आला को ठीकसँग विनियमित गर्न थाल्छ, जसले कम प्रवृत्ति निम्त्याउन सक्छ। हामी तथाकथित "पाप कर" को कुरा गरिरहेका छौं।
नयाँ कानुनले लागू गरेको वार्षिक इजाजतपत्रको भुक्तानी अपरेटरका लागि दोब्बर हुनेछ। यसबाहेक, श्रीलंकामा हरेक क्यासिनोले उनीहरूको कारोबारमा १%% कर शुल्क तिर्नु पर्छ। श्रीलंका क्यासिनो अपरेटरहरू सबै खुशी छैनन्, तर जूवाहरू पनि प्रभावित हुनेछन्। कानून सुझाव दिन्छ कि एक अनिवार्य $ 15 शुल्क क्यासिनो प्रवेश गर्नका लागि तिर्न पर्छ। यो नयाँ कानून सम्भवतः अपरेटरहरूलाई खेलाडीहरूको लागि उनीहरूको मूल्य बढाउन बाध्य पार्दछ।
यस नयाँ कानूनको मुख्य कारण जुवाको लोकप्रियतालाई कम गर्नु थियो र देशभित्रै सीमित रहेका ठाउँहरूका लागि पनि पैसा कमाउनु थियो।
श्रीलंकामा नियामक प्राधिकरणहरू
आजको लागि, त्यहाँ जुन कुनै पनि जुवा को लागी नियमन प्राधिकरण छैन।
श्रीलंकामा जुवामा कर सम्बन्धी कानूनहरू
ठाउँमा कानूनको अनुसार, सबै खेलाडीहरूले आफ्नो जितमा १०% कर तिर्नु पर्छ। यसबाहेक, तपाईले जितेको रकम, र कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, क्यासिनो ग्राहक समर्थन, र वकिललाई सम्पर्क गरेर।
शीर्ष १० श्रीलंकाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: 31 सक्छ, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० श्रीलंकाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० श्रीलंकाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरूको बारेमा एक विशाल बोनसको साथ!
2 श्रीलंका मा जुवा मा वर्तमान स्थिति
3 श्रीलंका जुवा कानून
4 श्रीलंकामा नियामक प्राधिकरणहरू
5 श्रीलंकामा जुवामा कर सम्बन्धी कानूनहरू
शीर्ष १० श्रीलंकाई ...